प्रचण्ड पत्नी सीता मैयाँ चुनाव मैदानमा
27th October 2017 | १० कात्तिक २०७४
कान्तिपुर गाथा -
बाहुनकी छोरी र शेर्पाको छोरा।
कनिका र सोनामको जोडी जमेको थियो। क्यामराको इफेक्ट जस्तो। कनिका शेडमा पर्दा शेर्पिनी जस्ती देखिन्थी। सोनाम शेडमा पर्दा बाहुन जस्तो देखिन्थ्यो।
दुवैको मूड बिहेमा थिएन। सोनाम बिहेभन्दा पहिले केटा र केटीका बीच अण्डरस्ट्याण्डिङ बनाउन चाहन्थ्यो। उसका धेरै साथीहरुले केटीहरुबाट धोखा पाएका थिए। त्यसैले ऊ बढी नै सतर्क थियो। कनिकाको बारेमा भने उसको दृष्टिकोण निकै सन्तुलित थियो।
केटाहरुको चरित्र चिन्नमा कनिका बेजोड थिइ। उसले रिलेशनको धेरै बाक्लो जालो तोडेकी थिइ। चार्लीसँग रिलेशन टुटेकोमा उसलाई खासै दुःख लागेको थिएन। तर, चार्लीले त्यो रिलेशन तोड्न खेलेको गेमले उसको भावनामा चोट पुर्‍याएको थियो। उसलाई दुःखी बनाएको थियो।
अघिल्लो साता सोनामले कनिकालाई डेटिंगका लागि कतै जाने संकेत गरेको थियो। संकेत बुझेर उसले सुदिप्तीसँग विदाको प्रस्ताव राखेकी थिइ। सुदिप्तीले उसको प्रस्ताव ठाडै रिजेक्ट गरी। प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनावको मारामारीमा कनिका जस्तो दक्ष पत्रकारलाई कसरी विदा देओस् उसले? केन्द्रीय राजधानीमा नै यस्तो मारामारी छ। चुनाव हुने र नहुनेमा जनताको मत बाँड्न खोजिएको छ। फेक न्यूज र पेड न्यूजको लहरो तानिएको छ। बाबुराम भट्टराई जस्ता माओवादी नेता एकै रातमा वामपन्थी र अर्को रातमा कांग्रेस भएका छन्। आफनी छोरी जिताउन देवी ज्ञवालीका विरुद्ध अरवौं खर्च गरेका प्रचण्डको चुनाव अभियानका सारथी बन्दैछन् देवी ज्ञवाली। यस्तो क्लाइमेक्स स्टोरीहरुको बीचमा कनिकाले विदा मांग्नुको तुक थिएन। उसले सोनामसँग भनी, ‘वेट टिल दि इलेक्सन्स आर ओभर।’
सारा पत्रकारहरु चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नको समाधान खोजी रहेका बेला कनिकाको दिमागमा प्रश्न उव्जियो, ‘के प्रचण्ड पत्नी सीताले चुनाव लड्लिन्?’ कनिकालाई लाग्यो, यसको सम्भावना छ। देउवा पत्नी आरजुले चुनाव लड्ने भएपछि किन नलड्ने सीताले? हो, सीताले आरजुले जस्तो पीएचडी पढेकी छैनन्। तर, जनयुध्दको परिचालनमा उनको योगदान आरजुको पीएचडीकै समानान्तरमा अभूतपूर्व रहेको छ।
प्रचण्ड पुत्र प्रकाश लगायत परिवारका सबै सदस्य संसदको सदस्य हुने परिस्थितिको निर्माण भएपछि सीता दाहालले मात्र संसदको चुनावमा भाग नलिनु राजनीतिक रुपले पनि खराब कुरा हो। चुनावको चक्र शुरु भएपछि प्रचण्डसँग भन्दा सीतासँग नजिकको राजनीतिक सम्वन्ध राख्दै आएकी एक परिचित महिलाले ‘सीता मैयाँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विचारमा रहेकी’ जानकारी कनिकालाई दिएकी थिइन्। त्यो दिनदेखि कनिका त्यसैमा भिडेकी छ। सीताजीले चुनाव लडने इच्छा देखाएपछि उनका लागि मधेशको सुरक्षित चुनावी क्षेत्रको खोज शुरु भएको छ।
समाचार खोतल्ने क्रममा कनिकाले थाह पाइ, पत्नी सीतालाई चुनाव लडाउन पति प्रचण्ड पनि इच्छुक थिए। भारत बिहारका कद्दावर नेता लालु यादवले आफनो सम्पूर्ण परिवार पार्टी र राजनीतिमा होमेका छन्। लालुका छोरा उप–मुख्यमन्त्री भै सक्दा प्रचण्डका छोरा पीए मात्रै छन्। खाली लोकलाजको डरले उनले आफनी पत्नीलाई चुनाव लडाउने इच्छा प्रकट गरेका थिएनन्। अहिले उम्मेदवारीको सिजन शुरु भएको छ। चुनावी चर्चाको चक्कर चलाउने बेला भएको छ।
यो पटक प्रचण्डले एमालेसँग एकतागर्ने भनेपछि पार्टी तीनवटा चीरामा बाँडिएको छ। ती तीन चीरा मध्ये एक चीराको नेतृत्व सीता मैयाँको हातमा जानेछ। प्रचण्डलाई थाह छ, आफैले नेतृत्व गरेको द्वन्द्वको राम्रो समायोजन हुन नसक्दा उनको आफनो र परिवारको घाँटीमा खतराको डोरी झुण्डिएको छ। त्यसैले अर्को चीराको नेतृत्व उनी आफैले गर्नेछन्। तेस्रो चीरामा प्रकाश छन्।
दाहाल परिवारभित्रको अन्योल र हाहाकार थाहा पाएपछि कनिकालाई दिक्क लाग्यो। त्यत्रो लडाई जितेर आएको भनेर नाक फुलाउने पार्टीका चेयरम्यान आफनो चेयरको सुरक्षामा लागेका छन्। माओवादी अध्यक्षका रुपमा उनी विश्वका धेरै नेताका सम्पर्कमा भएपनि उनीहरुको सम्झनामा छैनन्। पावर : प्रचण्डलाई अहिले चाहिएको त्यति नै हो। त्यो भन्दा बढी उनको कुनै खोज छैन।
‘बूढो चर्कै चकचके र ज्यादै छुकछुके भएको सीता मैयाँलाई मन परेको छैन। उनी यतातिर पनि सावधान छिन्। उनलाई थाहा छ, यस्ता राजनीतिज्ञहरुको बदमासी श्रीमतीहरुले नै ढाकी दिनु पर्दछ। प्रचण्डको ढाल बनेकी छिन् सीता मैयाँ। अहिलेसम्म प्रचण्डका सफलताहरुमा सीताको योगदान छ। असफलतामा प्रचण्ड आफै जिम्मेवार छन्। दाहाल परिवारकी मुख्य व्यक्तित्व भनेर चिनिएकी सीताको चुनाव लडने निर्णयले परिवारमा खुशी छाएको छ। सीताको चुनावी स्थिति सुदृढ नभएसम्मका लागि चुनावसार्न प्रचण्ड आफैं गुप्तरुपमा सक्रिय रहेको आशंका फैलिएकोछ,’ कनिकाको निष्कर्ष थियो।
प्रचण्ड पत्नी सीता मैयाँ चुनाव मैदानमा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।